Google iri kutoshanda pachiteshi cheChannel cheFuchsia OS | Linux Vakapindwa muropa
Google iri kutoshanda pachiteshi cheChannel cheFuchsia OS
Ruzivo rwekuvandudza rwangoburitswa iyo vagadziri veGoogle vari kuitisa uye ndeyekuti ivo vari kutoshandira kukwanisa kuendesa Chrome browser kuFuchsia OS.
Y aa iyo Fuchsia inotopa injini ye browser zvichibva paChromium codebase inoshandiswa kumhanya yakamira yega webhu, vanogadzira vanotaura kuti Chrome haisati yawanikwa sechinhu chakazvimirira Yakazara Fuchsia, sezvo chikuva chainyanya kugadzirirwa IoT nemidziyo yevatengi seNest Hub.
Asi mamiriro ezvinhu uye nekudzoka, kubva mukuvandudzwa kwehunyanzvi hweFuchsia hwakatotanga, hwakanangana nekuishandisa seplatform chikuva. Izvi zvinosanganisira seti yeshanduko inoita kuti zvikwanise kusundira yakazara Chrome browser kuFuchsia.
Mukati mezvirongwa vanozvizivisa, taura izvozvo kare muFuchsia vanogadzirira yekutanga vhezheni yeChannel yekutanga kweChannel 94 (iyo yakarongerwa kuburitswa munaGunyana 21).
Kune chikamu chebasa rekutama, ivo vanogadzira vanotaura kuti izvi zviri kuitwa zvishoma nezvishoma, kubvira pakutanga, zvinokwanisika kuvaka shanduro yakareruka umo kuiswa kwezvimwe zvinhu kunotsiviwa nemiti.
Sekufambisa kwekufambisa, stubs inotsiviwa nekushanda shanduro dzekodhi yakanangana neFuchsia. Semuenzaniso, Chrome inogadzira iyo systray yeFuchsia, kurodha pasi mafaera, Dzvanya Kufona, uchishanda nemidhiya inobviswa, syncing, tsika madhairekitori, zvishandiso zvePWA, kuratidza ndangariro uye CPU kutakura ruzivo, uye kuendesa maseturu kubva kune mamwe mabhurawuza.
Rangarira izvozvo Fuchsia OS yakagadziriswa neGoogle kubvira 2016, uchifunga nezvekukanganisa kuri mumunda wekuyera nekuchengetedzeka papuratifomu yeApple. Iyo system yakavakirwa paZircon microkernel, iyo yakavakirwa pazviitiko zveiyo purojekiti yeLK, yakawedzerwa kuti ishandiswe mumakirasi akasiyana siyana emidziyo, anosanganisira mafoni nemakomputa ako.
Zircon microkernel inoratidzirwa nekuwedzera LK nerutsigiro rwemaitiro uye akagovana maraibhurari, mushandisi danho, kubata chinhu, uye kugona-kwakavakirwa chengetedzo modhi. Iwo madhiraivha anoitwa seanoshandira mushandisi nzvimbo maraibhurari akatakurwa neiyo devhost maitiro uye anotarisirwa neiyo devmg mudziyo maneja.
ZveFuchsia yakagadzira yayo yega graphical interface yakanyorwa mumutauro weDart, uchishandisa iyo Flutter fomati, kuwedzera kune iyo projekiti zvakare kugadzira iyo Peridot UI fomati, Fargo package maneja, libc standard raibhurari, Escher kupa system, Magma Vulkan driver, Scenic composite maneja, MinFS, MemFS, ThinFS (FAT in Go mutauro), uye Blobfs faira masisitimu, pamwe neFVM zvikamu.
Zvekuvandudza kunyorera, C / C ++ rutsigiro rwuripo (ndatenda libc), Dart inopawo uye Ngura inobvumidzwawo muzvinhu zvehurongwa, mune iyo network stack GO uye muhurongwa hwekuvaka mutauro Python
Iyo system Administrator inoshandiswa kune iyo boot maitiro, ayo anosanganisira appmgr iyo inobvumidza kuumba yekutanga software nharaunda, sysmgr kugadzira iyo boot nharaunda uye basemgr kugadzirisa mamiriro emushandisi uye kuronga iyo login.
Kune chikamu che chengetedzo inokurudzirwa sandbox yepamberi yekuparadzanisa system, umo maitiro matsva asina mukana wekuwana zvinhu zvekernel, ndangariro haigone kupihwa uye kodhi haigone kuitiswa, uye namespace system inoshandiswa kuwana zviwanikwa zvakatemwa nemvumo iripo.
Iyo chikuva inopa hwaro hwekugadzira zvikamu, zvinova zvirongwa zvinomhanya mubhokisi rako rejecha uye zvinokwanisa kudyidzana nezvimwe zvinhu kuburikidza neIPC.
Finalmente kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kutarisa ruzivo rwekutanga kutumira pa chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Google iri kutoshanda pachiteshi cheChannel cheFuchsia OS
Iyo nyowani vhezheni yeNmap 7.92 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo
Thunderbird 91 ichave inotevera vhezheni yeMozilla tsamba yemutengi uye ichauya nenhau dzinozivikanwa